Ice आइस रिinks्कहरू जहाँ तपाईं म्याड्रिडमा क्रिसमसको लागि स्केटिंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ यात्रा समाचार
यो क्रिसमस, धेरै परिवारहरू सँगै रमाईलो गर्न र बिभिन्न योजनाहरू सँगै उनीहरूको साना बच्चाहरूको छुट्टीको फाइदा लिन खोज्छन्। र आइस स्केटिंग भन्दा बढी क्रिसमस के हो?
हरेक बर्ष जस्तै, म्याड्रिडले खेलको क्रिसमसको दिनको मजा लिन चाहनेहरूका लागि शहरका विभिन्न भागहरूमा धेरै आइस रिinks्कहरू स्थापना गर्दछ। जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै ट्र्याकहरू वर्षभरि खुला छन्। एक नवीनता को रूपमा, परिचय कोर्सहरू क्रमागत कार्यक्रमहरू गरीएको छ ताकि साना बच्चाहरूलाई स्केटिंगको स्वाद प्राप्त गर्न सकिन्छ।
1 सिबल्स प्यालेस क्रिस्टल ग्यालरी
2 कोलम्बस आइस रिंक
3 Villa de Vallecas आइस रिंक
4 Vicálvaro आइस रिंक
5 प्लाजा डे ला लुना आइस रिंक
6 बर्लिन पार्क आइस रिंक
7 आइस पैलेस सपनाहरू
8 लेगन्सको आइस रिink्क
सिबल्स प्यालेस क्रिस्टल ग्यालरी
सेन्ट्रोसेन्ट्रो सिबल्स भवनको क्रिस्टल ग्यालरी भित्र रहेको यसको आइस रिinkकमा स्केटि enjoyको आनन्द लिनको लागि उत्तम स्थान बन्छ। क्रिसमस २०१ 2017 को बखत, जसले मन पराउछ उसले ठूलो क्रिसमस रूखको छेउमा यसको m०० मी २ ट्र्याक तल स्लाइड गर्न म्याड्रिडको प्लाजा डे सिबिलहरूमा जान सक्छ।
सेन्ट्रोसेन्ट्रो सिबल्सले कहानी कथन र रचनात्मक कार्यशालाहरूको बृहत्तर कार्यक्रम पनि आयोजना गर्दछ। यस बीच, बुढा व्यक्तिहरू आराम गर्न र क्रिस्टल ग्यालरीको क्याफेटेरियामा फेरि शक्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।
यस बरफ रिink्कमा प्रवेशका लागि उपकरणको भाडामा6यूरो खर्च हुन्छ र 30० मिनेट स्केटिंग। यो डिसेम्बर २१ देखि जनवरी from सम्म खुल्ला हुनेछ।
कोलम्बस आइस रिंक
दुई m०० मी २ आइस स्केटि r रिinks्कहरू मैड्रिडको आइकोनिक प्लाजा डे कोलोनमा स्थापना गरिएको छ। दुबै न्यूयोर्कको रकफेलर सेन्टरमा प्रख्यात रिinks्क वा प्राकृतिक इतिहासको संग्रहालयमा आइस रिink्कबाट प्रेरित छन्।
डिस्कवरी गार्डेनहरूमा अवस्थित यस बरफ रिink्कमा प्रवेश नि: शुल्क छ र उनीहरूले परिचय स्केटिंग कोर्सहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि प्रदान गर्दछ। डिसेम्बर १ and र जनवरी ween बीचमा तपाईं म्याड्रिडको मुटुमा सम्पूर्ण परिवारको साथ बाहिर एक दिनको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
Villa de Vallecas आइस रिंक
यस म्याड्रिड छिमेकीले यस क्रिसमसको आफ्नै आइस रिंकको पनि उद्घाटन गरिसकेको छ, जुन पासेओ फेडेरिको गार्सिया लोर्कामा अवस्थित छ र १० 104 मी २ छ। यसको छेउमा, बच्चाहरूको बीचमा रमाइलो गर्ने बानीलाई बढावा दिन एउटा पढ्ने बुथ स्थापना गरिएको छ letters पत्रमा स्केटिंग initiative। बुथसँग १ 1.500 सय भन्दा बढी पुस्तकहरू वितरण गरिएको छ यसको m ० मिटर भन्दा बढीमा साहित्यिक विधाहरूको सर्तमा धेरै फरकको दायरा। क्रिसमस सकिसकेपछि ती सबै पुस्तकहरू सहरका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूमा दान दिइनेछ।
भिल्ला डी भेल्कास बरफ रिंकमा प्रवेश निःशुल्क छ र यो डिसेम्बर १ देखि जनवरी from सम्म खुला रहनेछ।
Vicálvaro आइस रिंक
Vicálvaro फेयरग्राउन्ड्समा, यस क्रिसमसमा आईस रिन्क स्थापना गरिएको छ जसले बच्चाहरू र आमाबाबुलाई खुशी पार्नेछ, किनभने यो नि: शुल्क छ। थप रूपमा, भेलावारोमा कोलोन रिink्क जस्तै उनीहरू परिचयात्मक आइस स्केटिंग कोर्सहरू पनि प्रस्तुत गर्छन्। जो आउन कोशिस गर्न चाहन्छन तिनीहरू डिसेम्बर ११ र जनवरी between बीचमा त्यसो गर्न सक्दछन्।
प्लाजा डे ला लुना आइस रिंक
म्याड्रिडको मध्य भागमा, ग्रान भिआको छेउमा प्लाजा डे ला लुना हिउँ रिन्क छ। एक घण्टा टिकटको लागतeयूरो छ, शनिवार, आइतवार र छुट्टिहरू बाहेक, जसको लागत 5.. .० युरो छ। स्केट गर्नका लागि ग्लोभहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, जुन ट्र्याकमा दुई यूरोमा बेचिन्छ। प्लाजा डे ला लुना बरफ रिन्क क्रिसमसभर बिहान १० देखि १० बजेसम्म खुला रहनेछ।
बर्लिन पार्क आइस रिंक
डिसेम्बर and र जनवरी ween बीचमा, यो म्याड्रिड पार्कले २०० m9 आइस स्केटि r रिink्क आयोजना गर्दछ जो कोहीलाई यी छुट्टि खेलहरूमा आनन्द लिन चाहान्छ। हप्ताको अवधिमा प्रवेश शुल्कeयूरो हो जबकि सप्ताहन्तको लागत 5..7,50० युरो हुन्छ र स्केटको भाडा मूल्यमा समावेश गरिन्छ।
आइस पैलेस सपनाहरू
विशाल शपिंग सेन्टर भित्र अवस्थित यस बरफ रिन्क सबै बर्ष खुला रहन्छ र हकी, फिगर स्केटि,, जन्मदिनको भोजमा फ्याँक्ने वा केही स्केटि lessons पाठ लिनका लागि उत्तम हुन्छ। यसको आयाम १ 1800०० m2 छ। स्केट गर्नको लागि ग्लोभहरू लगाउनु आवश्यक छ र घण्टाको आधारमा प्रवेश शुल्क € 7,50. between० र। १..15,50० बीच छ वा यदि हामी स्केटहरू भाडा लिन चाहन्छौं भने।
लेगन्सको आइस रिink्क
यसको १,1450० m2 को साथ, यस बरफ रिन्क स्केटिंगको लागि म्याड्रिडमा सबैभन्दा ठूलो हो। यो सबै बर्ष खुला छ र यसको विचित्रता छ कि उनीहरू फिगर स्केटि classes क्लासहरू प्रस्ताव गर्छन्। टिकटको मूल्यहरू दिन र समयमा निर्भर गर्दै 6,50..7,50० वा XNUMX. e० युरो हो।
क्रिसमसको समयमा स्केटिंगका लागि यी केही बरफ रिन्कहरू हुन् जुन म्याड्रिडमा अवस्थित छन्। बिदामा स्केट गर्न तपाईको मनपर्ने के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » सप्ताहन्त » क्रिसमसको लागि म्याड्रिडमा स्केटिंगको मजा लिन ice आइस रि r्क्सहरू